စက်ရုံအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးနိမ့်သောစျေးနှုန်း Semi-Finished 1.523 Mineral Flat-Top Photogrey Optical Lens-Mineral Lens-Weihai Dingxin Optical Co. , Ltd
အပြာရောင်ဖြတ် UV420 မှန်ဘီလူး
PC Photochromic အပြာရောင်ဖြတ်မှန်ဘီလူး
WEIHAI DINGXIN OPTICAL CO ။ , LTD
—Finished & Semi Finical Optical Lens
သင်ဒီမှာပါ : မူလစာမျက်နှာ>ကုန်ပစ္စည်း>ဓာတ်သတ္တုမှန်ဘီလူး
စက်ရုံအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးနိမ့်သောစျေးနှုန်း Semi-Finished 1.523 Mineral Flat-Top Photogrey Optical Lens
01 ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အညွှန်းကိန်း 1.523 သိပ်သည်းဆ 2.53 g / cm3
မြင်နိုင်သော 380 ~ 780nm အာဘီ 60
တိကျသောဆွဲငင်အား 1.32 ဂီယာ 92%
ပွန်းစားခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်6~ 8H မှန်ဘီလူးအရောင် စိမ်းလန်းသော
အချင်း 60 / 65 အထပ် HMC
02. Semi-lested 1.523 ဓာတ်သတ္တု (အဖြူ, PGX, PBX) Flat-Top ကိုမှန်ဘီလူး
Dingxin Optical ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းအထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ Dingxin coversရိယာအကျယ်အ ၀ န်းမှာ ၃၂၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိပြီး၊ အလုပ်သမား ၃၈၀ ခန့်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ဗဓေလသစ်မှန်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်မှုသည်နေ့စဉ် ၅၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
Dingxin သည် optical ထုတ်ကုန်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ထုတ်လုပ်သည်။ အဓိကထုတ်ကုန်များမှာဗဓေလးမှန်ဘီလူးနှင့်မျက်ကပ်မှန်များဖြစ်သည် ကုမ္ပဏီသည် CR-39၊ Aspheric photo chromic မှန်ဘီလူးနှင့် 1.56,1.61,1.67,1.74 စီးရီး resin lens များထုတ်လုပ်ရန်အထူးထုတ်လုပ်သည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂျာမနီ Satisloh ကုမ္ပဏီမှအပြည့်အဝအလိုအလျောက် RX ပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးသည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
Dingxin သည် ISO9001 နှင့် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး၊ အမှတ်တံဆိပ်မှန်ဘီလူးကိုတရုတ်နိုင်ငံပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပြည်နယ်များအားလုံးတွင်ကောင်းစွာရောင်းချသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဖောက်သည်များသို့တင်ပို့သည်။ USA, Germany, Mexico, SouthKorea, Turkey, Poland, Brazil, Peru မြောက်အာဖရိကနှင့်စသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာသည်အမျိုးမျိုးသောအခွင့်အလမ်းများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်သေချာစေရန်၊ ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတစ်ဆင့်လူများအားရှင်းလင်းပြတ်သားသောအမြင်အာရုံခံစားမှုရှိစေရန်။
1. သင်နမူနာလိုအပ်လျှင်နမူနာအခကြေးငွေနှင့်ပို့ဆောင်စရိတ်တို့ကိုစစ်ဆေးပါမည်။ နမူနာများကိုသင့်ထံပို့ပေးပါမည်
ကုန်ပစ္စည်းအခကြေးငွေ၊ ပို့ဆောင်စရိတ်၊ မှန်ဘီလူးများအပါအ ၀ င်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုပြသမည့် Proforma ငွေတောင်းခံလွှာကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပါမည်။
4. သင်၏ခန့်မှန်းချက်ကိုလက်ခံရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အမှာစာကိုစတင်ပါမည်၊ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏ ၃၀% ။
၅။ ရက် ၁၅ လမှ ၄၀ ရက်အလိုတွင်အမှာစာကိုသင်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၊
လက်ကား 1.67 resin ပလပ်စတစ် photochromic မီးခိုးရောင် optical မျက်စိမှန်ဘီလူး
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပလပ်စတစ်မှန်ဘီလူး 1.61 hmc photochromic optical lens
ဒီဇိုင်းပူသောရောင်းအားတစ်ခုတည်းသောရူပါရုံ ၁.၆၁ မြင့်သောအညွှန်းကိန်း photochromic hmc optical lenses
1.56 photochromic ပြားချပ်ချပ်ထိပ် bifocal Hard အပေါ်ယံပိုင်း optical မှန်ဘီလူး
လိပ္စာ: No.59, Donghai လမ်း၊ Eco & Tech Deve Zone, Weihai City, 264200 China ။
ဖက်စ်: + 86 631 5994169
မူပိုင်ခွင့်© WEIHAI DINGXIN OPTICAL CO ။ , LTD